Fanompoam-pitaovana vaovao sy famerenana vaovao momba an'i Basel - Zurich
Fitsangatsanganana an-tanàna sy fitsangantsanganana amin'ny Trans-Service Basel
06 Aprily 0
Airport shuttle, Basel, Airport mivezivezy, Limousine service, City Breaks
Tsy ireo mpanjifantsika raharaham-barotra ihany - fa ireo fianakaviana sy vondrona ihany koa ho an'ny olona 7 - dia manome ny fahafahana hanao dia lavitra amin'ny alàlan'ny sariam-pandaharana tsara tarehy. Indrindra mandritra ireo volana fahavaratra, i Basel dia manintona mpizahantany maro izay te-hahita tanàna manodidina an'i Soisa, Frantsa ary Alemana. Noho ny toerana tsara indrindra azonay ahafahanao manao ny fitsangatsanganana an-tanànanao ho azo iainana araka izay tratra. Maro amin'ireo mpanjifan'ny mpanjifanay no mankafy ny fahafahana mampifandray ny raharaham-barotra amin'ny fiainany manokana ary ny fitarihan'ireo mpiady za-draharaha lavitra ny tebitebin'ny orinasa sy ny trangam-bahoaka
BASELWORLD 2018 - Fialam-boly amin'ny Trans-Service Basel
Airport shuttle, Basel, Baselworld, Fivoriam-be
Isan-taona amin'ny lohataona, Basel dia tranon'ny herinandro ho an'ny orinasa 1,800 izay manolotra ny famantaranandro sy ny firavaka amin'ny Baselword. Ireo mpikarakara an'io fampirantiana goavana io dia tsy nitaraina momba ny maha-zava-dehibe ny mpitsidika. Ny mpivarotra 100,000 sy ny solontenan'ny mpivarotra no manantena ny hanatrika ny World Fair for Watches and Jewelery. Amin'ny Martsa 22, 2018 ny vavahadin-tsoavaly dia hisokatra ho an'ny mpitsidika. Miaraka amin'ny mpamily anao manokana mankany BASELWORD - Transfer Service Basel Ny EurAirport Basel dia minitra vitsy miala amin'ny toerana fanentanana. Nefa azo antoka - toy ny maro hafa
Basel, Airport mivezivezy, Limousine service
BASELWORLD 2018 - Mahafinaritra ny mandeha fiara miaraka amin'ny Trans-Service Basel
Airport shuttle, Baselworld, Fandefasana ny seranana, Fampandehanana ara-barotra, Fivoriam-be
Ny lohataona Basel dia manohana ny orinasa 1800 manolotra ny famolavolany sy ny firafitry ny firavaka ao Baselword. Momba ny isan'ny mpitsidika, ny mpikarakara ity fampirantiana zava-dehibe dia tsy maintsy tsy hitaraina, satria toy ny isan-taona, dia andrasana ny wholesalers tao amin'ny World Watch sy firavaka ho an'ny ny 2017 100.000 mpaninjara sy ny mpiasa. Amin'ny martsa 22 2018 dia hanokatra ny vavahadin-tsoavaly ny mpitsidika. Mety ho ny Basel TENY fiara - hamindra Service Basel ny Euro Airport Basel no misy fohy fotsiny fiara avy ao amin'ny fampirantiana foibe. Saingy tena tadiavinao - toy ny mpizaha tany hafa ihany - ny fampisehoana ny mpanamboatra
360 ° Fanomezana tolotr'asa ho an'ireo vahiny hotely any Basel
Manolotra fanompoam-pivavahana manokana ho toy ny trano fandraisam-bahiny ianao any amin'ny tanànan'i Basel tsara tarehy. Tsy manome asa fanompoana manontolo mandritra ny fijanonany tany Bâle fa afaka hifantoka amin'ny zava-dehibe - na tao amin'ny Basel Nitsidika toerana mana-tanàna taloha, ny fitsidihana ny Kunstmuseeum fivoriana na ny raharaham-barotra. Fiverenan'ny serivisy mivantana avy any amin'ny vavahadin'ny seranana na hotely Hodinihinay ianao rehefa tonga any Basel any amin'ny seranam-piaramanidina na eo amin'ny fiantsonan'ny fiarandalamby. Isika eo am-piandrasana ny fahatongavan'ny alalan'ny terminal ary hanamaivana anareo araka ny lalana, araka ny tiantsika ny hanampy anao amin'ny entana ho any ny limousine. Avy eo dia miara-manara-dia izahay
23 Janoary 0
Basel, Airport mivezivezy, Limousine service, Zuerich
Mandeha soa aman-tsara amin'ny sigara foana ianao miaraka amin'ny Premium Transfer Service Miezaka mitety orinasa na fahafinaretana amin'ny tenany manokana ianao ary te hividy fiarandalamby miaraka amin'ny seranana seranam-piaramanidina azo antoka alohan'ny handehananao? Ny mpitaingina anay dia hitondra anao amin'ny iray amin'ireo seranan-tsambo avo lenta sy tsara indrindra aty aminay, avy amin'ny birao na eo am-bavahadin'ny seranam-piaramanidina. Mazava ho azy fa hanampy anareo amin'ny entana izahay. Mazava ho azy, raha tara vao tonga ny fiaramanidina dia tsy hamela anareo hidina fa hiandry ny fahatongavanareo. Tonga soa sy mendrika amin'ny toerana ivezivezivezena Maro amin'ny mpandeha no mampiasa ny fifindran'ny seranana eo anelanelan'i Zurich Airport sy Euro